Date My Pet » pamusoro 4 Tips Kuziva About Dating
Last updated: Sep. 23 2020 | 3 Maminitsi verenga
Tiri zvakazara nomumwe munhu mazano kwose tinotarisira. Munyika izere vanhu vachiedza kuwana munhu zvinoita munhu wose anoda zvavanoda. Uye saka kazhinji vanouita kuridza nyore saka kana chokwadi hazvisi nyore zvachose. Dai taizorega vose akasangana murume kana mukadzi hope dzedu pashure zvose. Saka Handisi kutaura zvinhu zvakafanana “Unongofanira kuwana pamusoro chero achakabata iwe shure uye wazviita.” nekuti kana taigona tose kuita kuti tingadai tisingafaniri kuverenga kufambidzana zano. Saka ini hazvitauri kuva nyanzvi. Zvandinoita vanoti kuti vanzwisise. Tose tiri ichi pamwe chete.
Zvichida ichi ndicho chinhu chinonyanya kukosha kuyeuka pamunopinda kudanana mutambo. Asi zvakare pamwe chakaomesesa kuita tsika. Uye ndinofunga takave dzinenge zvose mhosva kuita nzira tinofunga munhu tinofarira anoda kuti kuitira kufadza navo. Asi imi muri kungoti amuri kuwana rudo rwechokwadi kuti nzira. Rudo rwechokwadi ndirwo akwirwe. Zvinonzi munhu achiona kwauri ndimi ani uye adoring iwe nokuti. Pashure pezvose Uri kuenda kuenda kuburikidza hwako hwose upenyu nokuita? Asi ichi kunouya basa. Uyewo unofanira kuva kuremekedza ivo ndivanaani. Saka Somuenzaniso unogona kuva rocker zvakaoma asi ivo semashoko cheesiest ari cheesiest vari Pop. Unofanira kuvaremekedza akafanana unoda kuti kuremekedza iwe. Havaedzi kuchinja mumwe. Ndanzwa kubva kuvanhu vari muukama-kare. Ndicho zvakaipisisa chinhu chaungaita. It chete kunotungamirira chigumbu uye kuvava.
The Little Zvinhu Vari Kunzwira
Uchava kutonga sei kutamba izvi ndiani munhu nokuti vamwe zvachose kuita sezvinoita chikuru wevaFiripi uye kuti wined uye vadya! Asi vakawanda vanofunga zvisizvo kuti wose kwakafanana kuti apo vakawanda vanoda chete rwezuva achibvunza kuti zuva ravo riri. Ndakambonzwa vanhu vachiti asati uye ndinowanzogumbukira nazvo. Imwe nzira inokosha chaizvo chinhu kana uri kuwana navo chipo ndechokuti unofanira kuziva chii Vakafanana. Kunoratidza kufarira pavo uye ndivanaani. The Generic zvipo zvakadai semaruva, Chocolates uye aftershave / anonhuwira zvakanaka pakutanga asi somunhu ukama mberi vakatanga zvipo zvenyu kuti zvishoma zvikuru munhu kuti munhu wauri kufambidzana naye.
Ehe, ichi yakaoma kana uine anonyara unhu. Kwete kuti pasi kuti anonyara panze hakuna pfuma pamaonero vachingotaura (Ndicho chikonzero vakawanda vedu kuva vanyori!) asi hazvisi nyore nguva dzose kuti chivimbo kuataura uye kuti vanogona kuwana munzira iwe kuwana rudo makasuwa nokuti munhu anofanira akuzive. Ndizvo sei kusarudza kana kufanana iwe kana kwete kutevera kwokutanga kukwezvwa. Zviripachena wakafanana muupenyu, rudo chete uye unofanira kushandisa pfungwa uye mazano vamwe kuziva ezvinhu munofanira kutaura pfungwa dzako uye kana zvakanaka yokunyarara asi kana unogona vazive ani imi muri. achiri Unogona kuva nyara. Izvozvo zvinogona kuva anokwezva. Asi kuedza pachena zvakare. Uye nzira dzokubatsira nadzo kuti yaizova kuita kosi kukurukurirana (kana mashoma!), kuita manheru makosi, kuenda toastmasters kana chete enda kure uko pasocial mhepo yakawanda sezvo uchigona. Hauzivi pokutangira asi zvakakodzera. Sezvo Amai vangu nguva dzose akati, haufaniri kurega upenyu hwako vamwe vanhu.
Pick The Person For You
A zvakajairika chaizvo chinhu kuti vanhu vanoita kuti vanonhonga munhu kwakavakirwa chii mhuri kana shamwari vanofunga. By zvose zvinoreva chenjera zano apo zano riri musoro akadai kana s / ndiye vakapindwa muropa nezvinodhaka vanhu vari pamwe chete vari kutitarisira kuti imi. Asi vanhu vane katsika hwokuvimba zvavo mhando sezvo munhu wose kuti mhando uye mhando munhu tiende nokuti yakasiyana nedzimwe kwatiri. Kana uri kutsvaka hippy kana beatnik yauri amuri kufara ane nyika murimi uye vakutarisire. Ichokwadi pane kunze nokuti nyika kudanana vasingagoni kuvimbwa navo asi zvavo nemashoko tiri tose kutsvaga munhu zvinonyatsoenderana nesu uye tinofanira kuva nomunhu tiri achinyatsoita uye ndiani excites isu. Hazvina kunaka maiva nemunhu nokuti vane vadiwa vako’ mucherechedzo tendero. Havasi ivo kudanana navo. Uri. Uye iwe wakaramba kuvataurira zvokuita saka regai kuvabvumira kuita zvisarudzo pamusoro penyu. Uye kuvimba zvisarudzo kwako pachako pfungwa. zvaisazogona vako murudo kazhinji ndivo zvakarurama ndivo.
5 Mitemo Wokuva Izayakaku
Sei Ramba Chinogutsa Relationship
Kudanana Mukadzi Muduku Pashure Divorce Made Easy